Dagaal ka dhacay Baar-Sanguuni Oo Askar lagu dilay, hubna lagu furtay. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Dagaal ka dhacay Baar-Sanguuni Oo Askar lagu dilay, hubna lagu furtay.
Last updated Jul 3, 2018 232 1
Dagaal u dhexeeya ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab iyo kuwa maamulka Jubbaland ayaa goordhow kusoo gebe-geboobay deegaanka Baar-sanguuni ee gobolka Jubbada hoose, halkaas oo fariisin u ah ciidamo Maraykanku gadaal ka riixayo.
Dagaalka oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan, in muda ah socday waxaa khasaare lagu gaarsiiyay malleeshiyaadka Maraykanku wato ee halkaas jooga, waxaana ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ay gacnta ku dhigeen hub kala duwan.
Warar horudhac ah oo ay heleyso Idaacadda Al-Furqaan waxay sheegyaan in ugu yaraan 3 askari oo katirsan malleeshiyaadka Soomaalida ee joogay Baar-sanguuni lagu dilay dagaalka.
Ciidamada Xarkada Mujaahidiinta Al-Shabaab waxay gacanta ku dhigeen hub iyo saanad ciidan oo muhiim ah, waxaana qoriyaasha gacanta Mujaahidiinta soo galay kamid ah qori BKM ah.
Magaalada Jamaame ee wilaayada islaamiga ee Jubbooyinka ayaa lagu soo bandhigay maydadka saddexda askari ee ay mujaahidiintu ku dileen dagaalkan, waxaana usoo daawasho tagay boqollaal ruux oo ay wejiyadooda ka muuqatay farxad.
Marar badan waxaa ciidamada jooga Baar-sanguuni la kulmeen weeraro qorsheysan oo uga yimid dhanka ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab, waxaana la xusuustaa weerar nafhurnimo oo lala eegtay markii ay ciidamadan soo gaareen deegaankan ay ku dhinteen kudhawaad 60 askari oo soomaali ah.
Weerar ka horeeyey oo duqeyn ahaana waxaa lagu dilay Askari Ameerikaan ah, halka kuwa kalana ay ku dhaawacmeen, waxaana dhimashada askarigaas ka tacsiyeeyay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump.
sahal xiis says 3 years ago
Allah ha ku halaago gacmaha mujaahidiinta, waa xoolo iska socda, waxay u dagaallamayaan, iyo waxay ku shimanayaan midna garan maayaan. Gaaladu ujeedday leedahay oo udagaallamaysaa ee bal dabaqoodhiyaw daacuun ku dilye maxaad ku dhimanaysaa???